अस्ट्रेलिया विजयी : RajdhaniDaily.com
Home खेल अस्ट्रेलिया विजयी
सिड्नी । सिरिज गुमाइसकेको घरेलु टोली अस्ट्रेलिया भारतविरुद्धको तेस्रो तथा अन्तिम टी–२० मा विजयी भएको छ । अस्ट्रेलियाले भारतलाई १२ रनले पराजित गरेको हो । योसँगै तीन टी–२० सिरिज भारतले २–१ ले जितेको छ । पहिलो खेलमा भारत ११ र दोस्रो बलमा ६ विकेटले हुँदै सिरिज जितेको थियो ।
१ सय ८७ रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको भारतले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाउँदै १ सय ७४ रन बनायो । भारतका कप्तान विराट कोहलीले सर्वाधिक ८५ रनको योगदान दिए पनि टोलीलाई जिताउन सकेनन् । पहिलो ओभरमै ओपनर लोकेश राहुल शून्यमा क्याच आउट भए । नवौं ओभरको पाँचांै बलमा शिखर धवन २८ रनमा क्याच आउट भए । १३औं ओभरको चौथो बलमा सन्जु स्यामसन १० रनमा स्मिथबाट क्याच आउट भए । सोही ओभरमा श्रेयस ऐर शून्यमा आउट भएपछि भारत दबाबमा परेको थियो । १८औं ओभरमा हार्दिक पान्ड्या २० रनमा क्याच आउट भएपछि अस्ट्रेलिया जिततर्फ अघि बढेको थियो । १९औं ओभरमा कोहली आउट भएपछि भारतको जित टाढिएको थियो । शार्दूल ठाकुर १७ रनमा अविजित रहे पनि टोलीलाई जिताउन सकेन । मिचेल स्विपसनले ३ विकेट तथा एन्ड्रयु टाई, एडम जाम्पा, ग्लेन म्याक्सवेल र सन एबटले समान १–१ विकेट लिए ।
त्यसअघि सिड्नीमा टस हारेर ब्याटिङ थालेको अस्ट्रेलियाले निर्धारित २० ओभरमा ५ विकेट गुमाउँदै १ सय ८६ रन बनाएको थियो । अस्ट्रेलिया ओपनर म्याथ्यु वेडले सर्वाधिक ८० रनको योगदान दिए । ग्लेन म्याक्सवेल ५४ रन जोडे । कप्तान आरोन फिन्च शून्यमा आउट भए । स्टिभ स्मिथ २४ रनमा बोल्ड आउट भए । व्यक्तिगत १९ रनमा जीवनदान पाएका म्याक्सवेल १३औं ओभरको अन्तिम बलमा म्याक्सवेल विकेटकिपर लोकेश राहुलबाट क्याच आउट हुन पुगे पनि स्पिनर युजभेन्द्र चहलले नो बल गरेको कारण उनी पुनः ब्याटिङको लागि क्रिजमा फर्किएका थिए । जुन जीवनदान भारतलाई भारी प¥यो । मोइजेस हेनरिक्स ५ र ड्यानियल साम्स ४ रनमा अविजित रहे । डार्सी सर्ट ७ रनमा रन आउट भए । वासिन्टन सुन्दरले २ विकेट लिए । टि नटराजन र शार्दूल ठाकुरले समान १–१ विकेट लिए ।
तीन ओडीआई खेलको सिरिज अस्ट्रेलियाले २–१ ले जितेको थियो । भारत र अस्ट्रेलियाबीच थप चार टेस्ट खेलको सिरिज हुनेछ । पहिलो टेस्ट डिसेम्बर १७ देखि एडिलेड ओभलमा हुनेछ ।
काठमाडाैं । नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको आह्वानलाई जालझेलपूर्ण भन्दै अश्वीकार गरेको छ । नेपाल पक्षधर स्थायी कमिटी सदस्यहरूको...
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पदमुक्त, पाएनन् विश्वासकाे मत
पोखरा । संसदको विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले स्वतः पदमुक्त भएका छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले बिहीबार प्रदेशसभासमक्ष राखेको विश्वासको मत प्राप्त...
सातामै ८३ अर्बको सेयर कारोबार
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा एक सातामै ८३ अर्बको सेयर कारोबार भएको छ । कारोबार रकमले निकै फड्को मारेको सेयर बजारमा बजार पुँजीकरण...
बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाले कोरोना संक्रमणको तेस्रो, चौथो लहरको सम्भावित खतरा र त्यसको जोखिम क्षेत्रमा रहेकाको सुरक्षालगायतका विषयमा विज्ञहरुसंग छलफल गरेको छ । खासगरी...
थप १५९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
काठमाडौँ । देशभर पछिल्लो २४ घण्टामा थप १५९ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय ४...
काठमाडौँ । बूढानीलकण्ठ नारायणस्थान मन्दिर आजदेखि भक्तजनका लागि पुनः खुला गरिएको छ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि गत वर्ष चैत ११ गतेदेखि भक्तजनका...
जव टेकुमा रहेको फोहोरको थुप्रोमा आगो लाग्यो (फोटोफिचर)
भर्खरै सत्यन श्रेष्ठ - June 3, 2021 0
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा उत्पादित फोहोर जम्मा गरेर राखेको ठाउँमा बिहिवार दिउसो आगलागि भयो । काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा जम्मा भएको फोहोरलाई टेकु स्थित विष्णुमति...
राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि अब प्रधानमन्त्री !
Editor-Picks Kumar Raut - February 24, 2020 0
काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न मिल्ने गरी संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । नेकपा...
मुलुकभर वर्षा, आजबाट सुधार
काठमाडौं । पश्चिमी वायु एवं स्थानीय वायुको प्रभावले शनिबार मुलुकभर बिहानैदेखि अपराह्नसम्म वर्षा भएको छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार शुक्रबारदेखि नेपाल...
Breaking News राजधानी समाचारदाता - May 21, 2021 0
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष नयाँ सरकार गठनमा पनि तटस्थ बस्ने भएको छ । नयाँ विकसित...
अदालत एक महिना बन्द गर्न सर्वोच्च बारको माग
प्रदेश ३ Kumar Raut - March 18, 2020 0
काठमाडौं । विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्न दक्षिण एसियाली मुलुकले उच्च सावधानी अपनारहेका बेला सर्वोच्च बार एसोसिएसनले तीन साता सबै इजलाश...
११ वर्षिय बालिका बलात्कार गर्ने ६३ वर्षिय पुरुष पक्राउ
भर्खरै Dhruba Lamsal - December 8, 2020 0
उदयपुर । ११ वर्षीया बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा बेलका नगरपालिका–९ बस्ने ६३ वर्षीय सूर्य पोखरेललाई दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सूर्यले ती बालिकालाई...
मनसुन कमजोर बन्दै : जोखिम टरिसकेको छैन
काठमाडौँ । मुलुकभर मङ्गलबार रातिदेखि मनसुन कमजोर बन्दै गए पनि जोखिम अझै टरिनसकेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । अझै पनि मनसुनी...
प्रदेश ७ Sushila Bishwokarma - February 29, 2020 0
बैतडी । भारतसंग सीमा जोडिएको बैतडीको झुलाघाट नाकामा कोरोना भाइरस चेकजाँचका लागि स्थापना गरिएको सहायता कक्षमा स्वास्थ्य परिक्षण कार्य जारी रहेको छ । सहायता...
Breaking News Kumar Raut - March 26, 2020 0
जेनेभा । विश्वभरि महामारीका रुपमा फैलिँदै गएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बिहीबारसम्म विश्वका विभिन्न देशमा गरी २१ हजार २९७ जनाको मृत्यु भएको छ । विश्व...
सागर पण्डित - June 11, 2021